Ehud ee Kitaabka Quduuska ah - Xaakin Yaa Qabtay Boqor Cawil Xasiloon
Diinta & Ruuxnimada Axdiga Hore
Ehud - Killer ee Eglon
Profile of Ehud, Cunning Assassin iyo garsooraha labaad ee Israel
Ehud wuxuu ku nuuxnuuxsaday mid ka mid ah xaaladaha ugu naxdinta badan ee Kitaabka Quduuska ah, dilka aadka u daran wuxuu weli wiiqaa akhristayaasha maanta.
Sababtoo ah fal-xumada reer binu Israa'iil, Ilaah wuxuu ku kiciyey boqor sharaf ah oo loo yaqaan 'Cegloon'. Oo reer Moo'aabna aad bay u dhibeen, maxaa yeelay, waxay ku dhawaaqeen Sayidkii, oo waxay u dirteen nidar Rabbiga ka dhexeeyey. Rabbigu wuxuu doortay Eehuud oo ahaa reer Benyaamiin , oo wuxuu ahaa kan labaad oo xukumi doona , laakiinse magaciisa lama tiriyo.
Ehud wuxuu leeyahay tayo gaar ah oo loogu talagalay howlgalka: Waxa uu ahaa mid gacanta ku hadhay. Oo wuxuu seeftii ku laayay laba xabbadood oo kibis ah, oo suun meged ahna dhexduu ku xidhnaa. Markaasaa reer binu Israa'iil waxay direen Eehuud inuu tago gurigiisii ​​Cegloon oo ku dhex tiil beertii qorraxda oo dhererkeedu yahayba.
Qorniinku wuxuu ugu yeeraa Cegloon "nin aad u dufan," sharaxaad badanna loo isticmaalo Kitaabka Qudduuska ah. Nafaqo-xumada ayaa aad ugu caansan dunida inteeda kale, sidaas darteed cayilka Caylon wuxuu muujin karaa in uu ahaa ciriiri, hurdada, halka maadooyinka uu ku dhowaaday.
Kolkaasay xabaashii ka tageen, oo Eehuudna waxay iska daba baxeen nimankii raaci jiray. Kolkaasuu tegey, oo markuu sii leexday ayuu shirkii u soo dhoweeyey Gilgaal, oo isna intuu u tegey ayuu ku yidhi, Boqorow, xaajadu xagga saruu ku sugnayd.
Cegloon wuxuu soo diri doonaa addoommadiisa. Eehuud wuxuu soo dhowaaday carshiga. Markii boqorku istaagay, ayuu Eehuud daaqiisii ​​ka soo dejiyey meeshii lagu qariyey, oo wuxuu horay u soo qoday Cegloon.
Oo boqorku wuxuu ku daadiyey malaggii, oo qabrigeediina dhimashuu ku awday. Ehud ayaa albaabka xiray oo baxsadey. Oo addoommadii Cegloonna waxay ka soo baxeen qabrigiisii, oo waxay u taagnayd miskiinka, wayna rajeeyeen, Ehuudna wuu iska tegey.
Oo Eehuudna wuxuu tegey dalkii buuraha lahaa oo reer Efrayim, oo isna buunkii buu afuufay, oo reer binu Israa'iil isagii ayuu soo celiyey.
Wuxuu u horseeday hoos u dhackii Webi Urdun , taas oo ay qabsadeen si ay uga hortagaan xoojinta Mucaawida.
Dagaalkii raacay, ayaa reer binu Israa'iil waxay ku dileen 10,000 oo reer Moo'aab ah, oo aan cidna u oggolaan inay baxsadaan. Ka dib guusha, Moo'aab wuxuu ku hoos maray xukumada Israa'iil, waxaana jiray nabaddii dalka oo dhan 80 sano.
Ehud wuxuu dilay cadowga sharafta leh, cadowga Ilaah. Oo weliba wuxuu kaloo kaxaystay reer binu Israa'iil, oo wuxuu baabbi'iyey dalka reer Moo'aab.
Ehud wuxuu si qarsoodi ah u qariyey gabbaadkiisa meel aan la fileynin, oo uu soo galo boqorka, waxaana uu ku guuleystay inuu ilaaliyo ilaaliyaha Eglton si uu uga tago. Isagu wuxuu dilay cadowga reer binu Israa'iil, isagoo cabbaar u muujinaya cadowga Ilaah.
Ehud ee Zakada:
Mufasiriinta qaarkood ayaa sheegaya in Ehud uu haystay gacanta midig ama dacday.
Ehud ayaa beeniyay oo khiyaaneeyey inuu ku guuleysto guushii, ficillada anshax-darrada ah marka laga reebo waqtiyada dagaalka. Sida uu u dilo nin aan hubaysnayn waxa laga yaabaa inuu u muuqdo mid naxdin leh, laakiin wuxuu ahaa qalab Ilaah oo uu xoreeyo reer binu Israa'iil.
Casharrada nolosha ee Ehud:
Ilaahay wuxuu isticmaalaa dhammaan noocyada dadka si uu u fuliyo qorshihiisa. Mararka qaarkood siyaabaha Ilaahay naloogu naqaano.
Dhamaan waxyaabaha ka mid ah dhacdadani waxay ku shaqeynayeen qaab jilicsan si ay uga jawaabaan ducada reer binu Israa'iil ee gargaarka. Ilaah wuxuu maqlaa qaylada dadkiisa, labadaba qaran ahaan iyo shakhsi ahaanba.
Tixraacyada Ehud ee Kitaabka Quduuska ah:
Sheekada Ehud waxa laga helaa Garsoorayaasha 3: 12-30.
Aabaha - Gera
Garsoorayaasha 3: 20-21
Ehud markaas ayaa u soo dhawaaday intuu keligiis fadhiyay qolka sare ee gurigiisa xagaaga oo wuxuu ku yidhi, "Waxaan farriin ka helayaa xagga Ilaah." Oo markii boqorkii soo ag istaagay ayuu Eehuud dhudhun u qabay, oo seeftiisii ​​ayuu ka soo bixiyey bowdadiisii ​​midig, markaasuu Cegloon caloolxumay. (NIV)
Markaasuu wuxuu ku yidhi, Ii raac, waayo, Rabbigu wuxuu Moo'aab siin doonaa gacantaada, boqorow. Oo iyana way raaceen isaga, oo waxay qabsadeen Webi Urdun shishadiisa, oo waxay reer Moo'aab ka qabsadeen tan iyo Moo'aab. (NIV)
Jack Zavada, oo ah qoraa xirfadle ah iyo wax ku darso ee ku saabsan On.com, wuxuu marti u yahay bogga Christian ah ee loo yaqaan 'singles'. Weligaa ma guursan, Jack wuxuu dareemayaa in casharrada adag ee uu bartay uu ka caawin karo kalgacalayaasha kale ee Masiixiyiinta inay dareemaan noloshooda. Mawduucyadiisa iyo ebooks waxay bixiyaan rajo iyo dhiirigelin weyn. Si aad ula xiriirto isaga ama macluumaad dheeraad ah, booqo Jack's Bio Page .
Rahab oo dhillo ah
Methuselah - ninka ugu da'da weyn ee weligiis noolaa
Hordhaca Kitaabka Ezekiel
5 Aayadaha Muhiimka ah ee Axdiga Hore
Haabiil - First Martyr ee Kitaabka Quduuska ah
Hordhaca Kitaabka Sekaryaah: Masiixu wuu imanayaa
Immisa jeer bay dadku ku siiyeen ficilada Axdiga Hore?
Eliiyaah - ugu da'da weyn ee nebiyada
Xaawa - Hooyo Dhammaan Nolosha
Hordhaca Kitaabka Sharciga Kunoqoshadiisa
Macnaha Fahamka Faransiiska "À Côté De"
Niels Bohr - Faahfaahinta Khiyaaliga ah
Isbarbardhigga SAT ee Iskuxidhka loogu talagalay Qaadashada Kulliyadaha California
Ilaahay neceb yahay khaniisiinta?
Ecclesia ee Sparta
Talooyin ardayda Ardayda Cusub ee Cusub
Warqadaha Talo-siinta Dugsiga ee Kulliyadda
Dominican Guud ahaan waa weyn
Yale School of Management Programs iyo Admissions
Sida Loo Ilaaliyo Mashruucaaga Gawaarida Primer ee Jidka fudud iyo Kharashka
Sida loo Isku Qabo Faransiiska "Amener" (inuu soo qaado, Qaado)
Wax ka Baro Wakiilada Erosion
Miyay 'Talking Angela' App u tahay halis ku wajahan badbaadada caruurta?
HARTMANN Magaca Fasalka Macnaha iyo Taariikhda Qoyska
Tababarka Cilmi-nafsiyeedka iyo La-talinta
6 Waddooyinka lagu hagaajinayo sawirada sawirada
Raadinta Dib u Dhageysiga Aaminka Asalka ah ee Nike Golf
Liiska Qiyaasta Farsamada Ballet
Ring Magazine Sannadka 100 Saacadaha Dhamaan
10 shahaadooyin ah oo ku xeeldheer mabaadi'da ah ee ku xeeldheer
Joan Baez waa heesaha ugu fiican
Sawirada Golfer Paula Creamer
Qodobbada Muuqaalka Warbaahinta Bulshada
CSU Stanislaus GPA, SAT iyo ACT Data